TOMATO "TAIMYR". TILMAAMO KALA DUWAN: SIFOOYINKA SOO SAARA IYO AGROTECHNICS EE BEERITAANKA, DARYEELKA IYO KORITAANKA YAANYO (SAWIR) - NOOCYO YAANYO
Sida loo abuuro iyo u koraan yaanyo "Taimyr"
Noocyo badan oo yaanyo ah oo suuqa yaala, kala duwanaanta Taimir waxaa lagu kala saaraa xaqiiqda ah in ay ku habboon tahay xaaladaha gobollada leh xagaaga gaaban iyo qabow. Tilmaamahani wuxuu go'aamiyaa caan-beelka gobollada waqooyiga badan Tilmaamaha beeraha ee isugeyntaas ayaa lagu falanqeyn doonaa qoraalkan.
Kala duwanaan "Taimyr" waxa loola jeedaa Bisaylka hore. Warshadu waa heer, waxaa lagu kala saaraa geedo iswada leh ilaa 30-35 cm oo dherer ah, iyo sidoo kale caleemo cagaaran dhexdhexaad ah iyo burooyinkeeda fudud. Badanaa 4-5 burush ayaa lagu sameeyaa baadiyaha. "Taamyr" waxay u adkaysataa dhaxan iyo cudurada guga. Waxaa la kori karaa labada koriyo iyo dhulka furan. In badan oo ku baahsan Siberia iyo gobollada Waqooyi-Galbeed ee Ruushka.
Ma taqaanaa? Noocyada ugu horreeya ee yaanyada ee Europe yimid waxay ahaayeen miraha huruud ah, taasina waa sababta ay dadka reer Talyaanigu ugu yeeraan yaanyada miraha, taas oo macnaheedu yahay "tufaax dahabi ah".
Gobollada waqooyi, yaanyo tani waa ku dhawaad: waxaa loo habeeyey jawiga degaanka, u adkaysata cudurrada kala duwan, dhalid wanaagsan iyo dhadhan wanaagsan. Gobollada leh jawi fudud, waxaa la doorbidi karaa inay kobcaan noocyo xitaa haddii aan loo adkeynin xaaladaha cimilada, laakiin waxay ka sarraysaa Taamir xuduudaha kale: dhadhan, dhalid, iwm.
Midhaha "Taimyr" dhexdhexaad ah, qaab wareegsan, cufan, midab casaan. Waxay u taagan yihiin sida salad, dhadhan fiican iyo awoodda ay u leeyihiin inay u soo qaadaan tamaandhadani masaafo badan. Cabbirka mid ka mid ah yaanyo wuxuu gaaraa 80-100 garaam. Iyada oo hal bushaji ah ayaa soo ururin kara ilaa hal iyo badh rodac oo miro ah.
Hubi noocyo noocyo ah sida yaanyada Labrador, Eagle Heart, Eagle's Beak, Madaxweynaha, Klusha, Truffle, Primadonna, Star of Siberia, Rio Grande, "Samar", "Samar", "Sevryuga", "Rio Fuego", "Evpator", "Openwork F1", "Explosion", "Casanova", "King of the Early", "Lyubasha", "Collective Farm Yield", "Honey Spas "iyo" Gigolo ".
Noocyada kala duwan ee noocaan ah waxaa loo qaybiyaa shirkadda "Biotechnics". Waxay u balan qaadeysaa in ay u hoggaansamayso GOST R52171-2003, hal xirmo waa inay ahaataa ugu yaraan 25 abuur. Intaa waxaa dheer, tan iyo noocyada kala duwan ma aha hybrid, waxaad ka heli kartaa abuurka naftaada, laga bilaabo miraha ka soo goosashada Taimyr hore. Si taas loo sameeyo, isticmaal miro si buuxda u kobcay. Abuurka qolka bannaan ee biyaha ku jira ayaa la diiday. Inta soo hartey waxay joogtaa 20-30 daqiiqo xal daciif ah oo ah kiniinka potassium, ka dibna la qalajiyey oo lagu shubay waraaqo calaamadaysan oo ku yaala guga ilaa guga.
Waa muhiim! Ha isku dhexgelin noocyada kala duwan ee "Taimyr" ee shirkadda "Biotechnics" iyo noocyada kala duwan ee dhexdhexaadka ah "Taimyr" (waxaa lagu magacaabi karaa "Taimyr F1"), asal ahaan ka soo jeeda Diiwaanka Gobolka RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V.
Gobollada waqooyiga ee dhulka u furan "Taamyr" waxaa badanaa lagu beeray saddexda bilood ee ugu horreeya bisha Juun, iyadoo leh heerkulka cimilada xasiloon iyo maalintii iftiin leh. Qoyaanka xad dhaafka ah wuxuu saameeyaa khudraddan si xunxun leh, laakiin dhirta waxay u baahan tahay waraabin joogta ah (ka badan tan dambe). A bacriminta, carrada caddaalad leh cadaadis xoogaa acid ama dhexdhexaad ah waa suurad wacan.
Waxaan koraan yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan.
Haddii ciidda uu yahay acidic, ka dibna waa lime, ciid waxaa lagu daraa carradu culus, waxay bixisaa dheecaan. Kuwa ugu haboon ee yaanyada waa basasha, digir iyo kaabaj. Waa wax aan loo baahnayn in ay ku beeri ka dib baradho iyo eggplants - kiiskan khatarta cudurrada dhirta uu kordho.
Diyaarinta abuurka iyo beeritaanka
Khudraddaas waxaa koray habka rassadny. Maadada dhirta waxay bilaabataa badhtamaha April. Si aad u bilawdo, miraha waxaa la dhigaa dusha sare ee daboolay maro qoyan, ka dibna waxay ku daboolaan maro dusha sare ah. Dhowr maalmood gudahood, waa inay soo rogaan. Miro la jarjaray waxaa lagu beeray weel si loo geedo. Xayawaanka taangiyada noocan ahi waa inay noqdaan kuwo bacrin ah oo dabacsan. Waxaa ka wanaagsan inaad iibsato substrate diyaar u ah. Ka hor inta beerto abuurid qoyaan ciidda taangiyada. In geedi socodka beerto ee ciidda, cadayga ka dhigo ku saabsan grimes centimeter, iyaga ku rid abuurka iyo iyaga ka dhaadhac dhulka. Ka dibna weelasha waxaa lagu daboolaa filim cad, oo ah in laga saaro ka dib marka biqilka. Nidaamkan oo dhan, dhulka waxaa si qaas ah loo qasi karaa qori buufin leh, isaga oo ka hortagaya inuu qalajiyo, heerkulka qolka waxaa lagu hayaa ilaa + 25 ° C.
Ma taqaanaa? Wakhti dheer, yaanyada ayaa loo tixgeliyey mid aan la dabooli Karin ama xitaa kuwa sunta ah. Waxay yiraahdaan dabeecadaha ku aaddan yaanyada ayaa isbeddelay kaddib markii gawaarida Maraykanka Robert Gibbon Johnson uu cunay baaldi dhan oo yaanyo ah 1820kii, halka caafimaadkiisa aan dhaawacmin.
Ka dib maalmo yar ka dib marka laga saaro filimka, marka geedo si kalsooni leh u koraan, waa inaad bilowdid inaad hoos u dhigto heerkulka qolka kaas oo geedo ku yaal. Tani waa in si tartiib tartiib ah loo qabtaa, oo joogso marka heerkulku gaaro + 17 ° C. Isla muddadaas, waxaad u baahan tahay inaad abaabulato iftiin dheeraad ah ee geedo, sidaas darteed caleemaha waxaa la daboolay ugu yaraan 12-14 saacadood maalintii. Iyada oo dhismaha laba caleemo dhalaalaan dheef.
Baro yaanyo waa berri, miro ama qudaar.
Sida kor ku xusan, geedo waxaa lagu beddelaa dhul furan tobanka sano ee hore ee bisha June. Ka hor inta beerto, Bacriminta organic waxaa lagu dabaqaa sariiraha mustaqbalka. Guga, sariiraha waxaa lagu daaweyn karaa isku dar ah Bordeaux ama xal sulphate copper. Waxay ka dhigaan carrada sida ku qoran tilmaamaha. Daaweynta noocan oo kale ah waxay hagaajin doontaa tayada ciidda oo jeermiga ka nadiifiya. Marka laga beerto, geedo si taxadar leh looga saaraa koobabka, sidaas darteed a clod ah ee ciidda ma ka qaybi ka soo xididdada geedka. Kadibna waxaa lagu meeleeyaa haraaga diyaarsan. Sariirta waa in horay loo waraabiyaa. Next to the sprouts isla markiiba dhigay boogaha for garter afkoda. Beeridda lagu koriyo waa isku mid. Qoob-soo-saaraha wuxuu u oggolaanayaa ilaa 15 dhirkiiba halkii mitir labajibbaaran. Si kastaba ha noqotee, dhererka noocaas ah ee kiisaska badan laftiisa maaha mid xaq u leh, sidaa darteed waxaad ku xaddidan kartaa beeritaanka yar ee cufan, tusaale ahaan, 8-10 dhirta halkii mitir labajibbaaran.
Biyaha "Taamyr" waa inay noqdaan kuwo joogto ah, qiyaastii hal mar asbuucii, illaa dabcan, ma jiro roob. Nidaamkan waxaa inta badan la socda dabacsan ciidda hareeraha duurka yaanyada iyo jarista haramaha. Marka midhaha ay bilaabaan inay bislaadaan, xoojinta waraabinta waa in la yareeyo hal iyo badh ilaa laba jeer. Haddii kulaylku kulul yahay, mulching leh balka ama caws loo isticmaalo si loo ilaaliyo qoyaanka ee ciidda. Mabda 'ahaan, kala duwanaanshahan uma baahna in la xakameeyo. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira tallaabooyin badan oo ku saabsan duurka, iyo haddii qaar ka mid ah aan la saarin, dalagga ma dhalin karo. Yaanyada quudinta leh doodwanaag salka la dhejiyo oo lagu daro digirta iyo Bacriminta fosfat. Mullear waxaa lagu bedeli karaa digada digaagga oo dareera. Xilliga xagaaga, waxaad ku qaadataa lix dhaymo, oo ay ku jiraan hordhaca maaddooyinka dhirta ka hor inta aan laga helin duurka dhul furan. Duurjoogaha ayaa loo baahan yahay.
Waa muhiim! Ka dib markii transplanting, waxaa laguma talinayo in ay ku quudiyaan dhirta leh Bacriminta nitrogen - tani waxay keeni kartaa koritaanka xad-dhaaf ah ee duurka, hoos u dhalidda iyo hoos u tayada.
Kala duwan Tani waa mid u adkaysata cuduro kala duwan, gaar ahaan diidmo xun oo soo daahay. Si kastaba ha ahaatee, xilliga gu'ga, sida qiyaasta ka hortagga, goobta mustaqbalka ee soo socota waxaa lagu daaweeyaa xal of vitriol ama bordeaux isku dar ah. Fangasidahaas waxaa loo isticmaalaa sida ku qoran tilmaamaha. Intaa waxaa dheer, jeermiska abuur ah oo leh xal of potassium permanganate waxaa loo isticmaalaa (eeg qaybta "Selection of seeds").
Baro sida loola tacaalo ugudhaca yaanyada.
Kala duwanaantu ma aha mid u adkaysata cayayaanka, si kastaba ha noqotee, caarada, qashinka, xayawaanka, boodhka, nematodes, iwm ayaa waxyeelayn kara. Sida qiyaasta ka hortagga ah, dayrta qulqulaya oo la xoqdo codsiga cayayaanka ayaa badanaa la isticmaalaa. Haddii dhirta lagu soo weeraro cayayaanka, waxaa lagu daaweeyaa sida waafaqsan tilmaamaha cayayaanka, sida "Malophos", "Decis", "Provotox" iyo daroogooyinka kale. Medvedka.
Harvest sida midhaha bislaadaan. Waad soo ururin kartaa iyaga oo aan qaan gaadhin, waxay si fiican u daadin karaan qolka. Midhaha yaryar kuwan waa mid aad u cufan oo u dulqaadan kara gaadiidka. Isticmaal iyaga cusub, oo sidoo kale ka samee ketakas iyo saliida gaasta, iyaga ku qaboojiyaha cusub qaboojiyaha, iwm.
Sidoo kale akhri sidaan si habboon u keydiyo yaanyada iyo isu diyaarinta jiilaalka.
Sidaa darteed, noocyada kala duwan ee "Taimyr" waa mid qiimo leh oo aan ku qabsoomeynin cimilada gobollada waqooyiga. Isla mar ahaantaana wuxuu leeyahay dhalid wanaagsan oo dhadhan. Sidaa daraadeed, kala duwanaanta noocaas ah waxay u qalantaa dareenka dadka ku kobcaya beerta khudradda ee jawiga cakiran.